Bangladesh: Ny Lalàna Mikasika Ny Fananàn’ny Fahavalo Sy Ny Tondradrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2017 15:04 GMT
Ao anatin'ny fitetezana ny tontolon'ny blaogy ao Bangladesh amin'ity herinandro ity, horesahantsika ny mikasika ny lalàna tranainy iray tsy mendrika, izay navoaka tamin'ny fotoanan'ny ady, ary nampiasain'ireo mpampanjana-bola mba hakana ny fanànana sy hanararaotana ny zon'ireo vitsy an'isa. Hiresaka ihany koa ny mikasika ny tsiambaratelo maizimaizina izay manelohelo ao an-tsain'ny vehivavy ao Bangladesh sy any amin'ny firenena hafa manerana ny tany, ho tombony ho an'ireo orinasa ara-barotra. Io ary mbola betsaka hafa ihany koa no ao anatin'ny fitetezana mandritra ny herinandro.
Ny lalàna mikasika ny fananan'ny fahavalo
Mijanona voalohany eo amin'ny Dhaka Blog [En] isika, izay nanokanan‘i Assif lahatsoratra iray ho an'ilay lalàna iray tsy mendrika izay nofidiana talohan'ny fahaleovantenan'i Bangladesh :
Taorian'ny adin'ny 1965 nanoherana an'i India, ny governemanta Ayub (tao Pakistàna), tao anatin'ny fahendreny tanteraka, dia nanapaka hevitra ny hamoaka zavatra antsoina hoe « ny lalàna mikasika ny fananan'ny fahavalo ». Izy bio dia nahafahana hanambara ny olom-pirenena iray, na iza na iza, ho « fahavalo » ary haka ny fananany. Taorian'ny fahaleovantenan'i Bangladesh, namerina ny lalàna indray tamin'ny 1974 ny governemanta avy amin'ny ligy Awami… , ary nantsoiny hoe « ny lalànan'ny fananana nogejaina ».
Avy eo dia tatarain'i Assif ny fomba nampiasan'ireo governemanta politika rehetra azy io mba hamoretana ireo vitsy an'isa, ary indrindra fa ny Hindo. Ilay tena henatra ho an'ny firenena no iantsoany izany.
Manazava ny blaogy Unheard Voices [En] avy amin'ny vondrona Drishtipat:
Nanodinkodina ny lalàna tamin'ny alalan'ny fanampian'ireo manampahefana mpanao kolikoly ato amin'ny fanjakana ireo mpampanjana-bola mba hakana ny fanànan'ireo tompony Hindo tamin'ny fanondroana azy ireny ho toy ny « fahavalon'ny Fanjakana ».
Mba hanarenana ny toedraharaha, tamin'ny 2001, nifidy ny fanafoanana ny lalànan'ny fananana nogejaina ilay governemanta fahiny avy amin'ny ligy Awami. Fa tsy nihatra mihitsy izany noho ireo fanoheran'ny sasany mpampajana-bola nanan-kery ara-politika sy noho ireo fahasarotana araka ny lalàna.
Fotoana izao hanafoanana ity lalàna tsy mendrika ity, hoy ilay bilaogy mamintina.
Mbola tena manan-danja tokoa ve ny lokon'ny hoditra ?
Manoratra ao amin'ny blaogy Adhunika Blog [Ang] i Himadri Ahsan, momba ny tsiambaratelo maizina iray mbola manelohelo mandrakariva ireo vehivavy amin'ny faritra maro manerana ny tany ary indrindra fa ao Bangladesh. Manoratra ilay blaogera:
Ireo vokatra manafotsy hoditra no mbola anisan'ireo ankosotra afarana betsaka indrindra ao amin'ilay soba-kaontinanta indiana, Afovoany Atsinanana ary eo anivon'ireo Amerikana taranaka Afrikàna .
Mazava ho azy , ny antony mahatonga ity zava-mitranga ity dia ny finoana raiki-tampisaka fa misy fitsaratsaràna ara-tsosialy miraikitra amin'ny hoditra matroka. Any Bangladesh, matetika voadoka sy ampitahaina amin'ny Sahib (Anglisy) na Pathan (Pakistaney) ny olona fotsy hoditra, ireo vondrona olona roa ”ambony” nibodo an'i Bangladesh.
Ny politika sy ny tondradrano, ary ny fanapotehana ny tranobe iray
Nandritra ny tondradrano, nifantoka teo amin'ny tsy fahampian'ny fandraisan'ireo antoko politika anjara nandritra ny hetsika fanavotana ireo faritra traboina tamin'ny tondradrano ny adihevitra nanerana ny firenena. Satria efa nambara ny fepetra milaza hamehana, dia noraràna ny hetsika politika rehetra. Mitatitra ny blaogy In the Middle of Nowhere [En] fa nitsikera ny mpanao poltika ny governemanta, amin'ny fanipihana tsara fa fotoana izao tokony hanampiana ny niharam-boina tamin'ny tondradrano fa tsy fotoana hanaovana fanararaotana politika [amin'ny tondradrano]. Manontany ilay blaogera: ” Fa inona marina moa no tena dikan'ny hoe, manao politika manararaotra ny tondradrano?” Mety nanome ny valiny angamba ny mpanolotsainan'ny fanjakana nandritra ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra. « [Malalaka] ny hanampy ny olona ireo mpanao politika, toy ny olontsotra rehetra, fa tsy handeferena raha misy fivezivezena miaraka amin'ny faneva politika, na iray aza, ».
Toy ny notsipihan'ny blaogy A Nikonian’s Blog [En]:
Ahoana ah ? Miaramila tsotra mitazona seza fidiovana sady miomana ho alaina sary mandritra ny fizarana fanampiana ho an'ny mponina no hitantsika eto. Tsy mandre ny anaran'ity manampahefana madinika kely ity ve isika amin'ny fahitalavitra raha toa ka hizara sakafo ho an'ireo traboina tamin'ny tondradrano ireo manampahefana ao amin'ny fanjakana ? Tsy ho fitaovana ampiasain'ny tafika izy tenany ihany ho anà tanjona ara-politika ve ity tondradrano ity ?
Raha toa ka eo amoron'ny faharavàny i Bangladesh noho ireo fahasimbana ateraky ny tondradrano, afaka niatrika ny fandravàna tranobe iray manana rihana miisa roa amby roapolo (Rangs Bhaban) izay nalefa mivantana tamin'ny fahitalavitra kosa ny mponina ao aminy. Manainga fanontaniana mitombina ny Unheard Voices [En]
Fa inona no zavatra nahamaika nandravana tranobe fiasàna avo be toy ireny izay latsaky ny 24 ora ny fampandrenesana nomena?